पाल्पामा एकै दिन थपिए ५० काेराेना सङक्रमित, छहराका मात्रै २९ जना ! - Sero Fero News
पाल्पामा एकै दिन थपिए ५० काेराेना सङक्रमित, छहराका मात्रै २९ जना !
पाल्पामा थप ५० जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानका १ सय २६ जना मानिसको स्वाब परीक्षण गर्दा ३८ जना पुरूष र १२ जना महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हाे ।
स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार पाल्पामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ सय ४८ पुगेको छ । बुधबार पाल्पाकाे रैनादेवी छहराका २९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले बताए ।
पछिल्लो समय भारतबाट आएका मानिस बढेका कारण भारतबाट आएका झण्डै शतप्रतिशत मानिसमा सङ्क्रमण देखिएकाे छ । पाल्पामा हालसम्म २ हजार २ सय ७० जनामा काेराेना पुष्टि भैसकेकाे छ, जसमध्ये १ हजार ९ सय ८३ जना काेराेना सङक्रमण मुक्त भैसकेकाे छन् । ३९ जनाकाे ज्यान गएकाे छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि पाल्पामा बुधबार बसेको डिसीसीएमसीको बैठकले बैशाख १७ गते राति १२ बजेदेखि बैशाख २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अत्यावश्यक सवारीसाधन, तरकारी, दुध, एम्बुलेन्स, बिरामी बोक्ने सवारी, प्रेस, माछा, मासु, पानी पेट्रोल, निर्माण सामग्री जस्ता सवारीलाई भने सञ्चालन गर्न दिने जनाएको छ ।